Gen. Indha-qarshe “Dooman Ay Al-Shabaab Lahaayeen Ayaan Buru-burinay” (DHAGEYSO) – Idil News
Gen. Indha-qarshe “Dooman Ay Al-Shabaab Lahaayeen Ayaan Buru-burinay” (DHAGEYSO)
MUQDISHO(IDIL NEWS)-Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed General Daahir Aadan Cilmi (Indha qarshe), ayaa sheegay in hawl-gallo ay ka sameeyeen Ciidamada Xoogga deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe inay ku burburiyeen dooman ay isticmaalayeen Ururka Al Shabaab.
Taliye Indha-qarashe, ayaa sheegay in Kooxda Al-Shabaab ay mar walba isku dayaan inay dhibaateeyaan shacabka, ciidamada xoogga dalkana arrintaasi ay ka soo horjeedaan oo habeen iyo maalinba ay difaacayaan.
“Doonyo waxay sameysteen oo yar yar, oo biyaha ay uga kala gudbaan, doonyihii qaar waan gubnay qaarna gacanta ayaan ku dhignay, waxay mar walba dhibaateeyaan shacabka beeraleyda ah, balse annaga kama yeeli doono arrintaasi” ayuu yiri Gen. Indha-qarshe.
Sidoo kale, General Indha-qarshe ayaa sheegay hawlgalada in keliya aysan ku koobneyn gobolka Shabeellaha Dhexe, balse xoogooda uu ka socdo gobolada Shabeellaha Hoose iyo Hiiraan.
“Hawl-galada waxay ka socdaan qeybo badan oo ka mid ah gobolada dalka, waxaan dhawaan isku furnay wadooyin badan oo horey Shabaab ay go’doomiyeen”. ayuu yiri Gen. Indha qarshe.